Zijabulise ngezipho - Psychology 2022
Yilokho okhokhelwa ngakho
Isikripthi esidala - iraki elifanayo
Uthando, ubudlelwano nemali
Umkhuba wokukopela uthinta ubudlelwano, imisebenzi, kanye nokukhetha kwethu ezimeni eziningi. Thola ukuthi ungayisusa kanjani!
Lapho owesifazane ezisindisa, ngokuvamile uthethelela lesi simo sengqondo ngokuntengantenga kwezimali kanye nokuntula ukuzethemba ngekusasa. “Bengizowathenga amabhuzu (ingubo, i-lipstick), kodwa hhayi manje. Kungcono ukonga imali ngosuku lwemvula."
Ukuzisindisa kulapho umuntu efuna okuthile, kodwa enqaba noma engavumi nokuthi uyayidinga. Ngamunye wethu unomthombo othile wezinto ezibonakalayo: abanye banokuningi, abanye banokuncane. Kodwa-ke, owesifazane othanda yena uzosindisa okuthile futhi asebenzise imali ngezifiso zakhe, kanti omunye, ngokuphambene nalokho, uzokwenqaba ukuzithengela futhi anikeze imali ekufezeni imigomo yabanye abantu. Angaba nesandla esivulekile, kodwa kwabanye, ngakho-ke uthengela umngane wakhe, udadewabo, asebenza naye izipho, kodwa uyancishana, uzikhethela okuthile. Kungani lokhu kwenzeka? Ufunda kanjani ukupha futhi uhehe imali nengcebo empilweni yakho?
Ukuzisindisa kuhlotshaniswa nomuzwa wokungazithandi. Ngisho noma owesifazane engacabangi kanjalo, izenzo zakhe zinikeza umlayezo oyinhloko wesisulu: "Angifanele lokho engikufunayo ngempela," "Angifanele, ngakho angikudingi." Ngokwalesi simiso, ukhetha ubudlelwano, umsebenzi, imvelo. Isibonelo, ukuba nemfundo enhle kanye nesipiliyoni somsebenzi, owesifazane uhola isenti futhi akanyusi isitebhisi somsebenzi … Eqinisweni, kunezinketho eziningi emhlabeni ukuthi angazibona kanjani futhi ngesikhathi esifanayo athole inhlonipho. iholo.
Kodwa umuntu wesaba ukuthi ngeke aqashwe yilo noma leyo nkampani ngenxa yezizathu ezihlukahlukene: "Kuthiwani uma ngixoshwa ngenyanga", "Yonke indawo sidinga ukuxhumana," "Akuyona leyo minyaka," njll.
Izinkolelo ezinjalo ziholela eqinisweni lokuthi umuntu ufika engxoxweni enomuzwa wokuziqhenya: esaba ukukhombisa ukungaqiniseki kwakhe, usakaza ukuzethemba okukhulu ("Akekho ongangibonga"), okucasula umqashi. Noma - ngesandla esiluliwe ("Angazi nokuthi iholo lami kufanele libe yini. Iyiphi ozoyiqamba").
Iholo lethu liwukulinganisa kwethu kwamanje.Kodwa empeleni, ngenxa yokungabaza, sizama ukuthola ukuqashelwa kokubili kumqashi empilweni yomphakathi kanye nasemadodeni asebudlelwaneni, sivumelana nokuncane.
Sivame ukukopisha ukuziphatha kwabazali bethu.Futhi isimo sengqondo mayelana nemali. Kodwa-ke, izimo zengqondo zakudala zithinta impilo yethu kuphela lapho zisakazwa ngentshiseko yizihlobo: "Ungachithi okuningi - awazi ukuthi kuzokwenzekani kusasa", "Manje isikhathi esinzima kangaka - sibeke eceleni usuku lwemvula. ","Imali philistine." Abantu abanezinkolelo ezifanayo bazama ukonga kukho konke, qhathanisa amanani, noma ngabe umehluko ungama-hryvnia ambalwa kuphela.
Kunendlela eyodwa kuphela yokuphuma ezimweni ezinjalo - lapho indodakazi noma indodana yabazali abanjalo ivula i-antiscript.Okusho ukuthi, umuntu akalaleli ukuphawula futhi enze izinto ezithinta imali ngendlela abona ngayo. Nokho, ngemva kweminyaka engu-23 ngisebenza, ngaqiniseka ukuthi akubona bonke abaphumelelayo. I-antiscript izosebenza kuphela uma umuntu enohlobo oluqinile lwesistimu yezinzwa kanye nesimo esiqinile emigomweni yomuntu siqu.
Kodwa ngokuvamile abazali bacindezela izingane, futhi badlala indima yesisulu, beqiniseka ukuthi abafanelekeli imali, ngakho-ke abasoze bayithola.
Indoda ibona ngokushesha ukuthi yimuphi owesifazane ozisindisayo.Owesifazane usakaza (indlela asabela ngayo ezipho), kanti okwesibili - ukuthi uziphatha kanjani. Abanye besifazane bajabule kakhulu nge-chamomile noma ikhadi leposi, njengokungathi akekho obanike izipho. Lokhu kuziphatha kusikisela ukuthi izinto ezincane zanele ukuzuza inhliziyo yalo wesifazane.Okungukuthi, uziphatha njengoCinderella, ojwayele ukufeza izibopho zakhe kwabanye kuphela. Ngakho-ke, ngokusho kokuziphatha kowesifazane oyedwa, ungaqonda ukuthi udinga ukunikeza amadayimane, futhi ngokusho kokusabela komunye - ukuthi imbali ikwanele kuye, uzojabula.
Khumbula:amadoda awavamile ukuhlakaza imali (kulokhu, asithathi i-neurotics). Kodwa uma umuntu ebona ukuthi ikhadi leposi lanele, uzolinikeza kuphela, kungakhathaliseki ukuthi ucebile kangakanani.
Ungaba kanjani ophanayo kuwe?Okokuqala, u-10% wanoma yimaphi amarisidi emali kufanele asetshenziswe ngokushesha kokuthile okuzoletha injabulo, ngisho noma kubonakala kuwe ukuthi lokhu kuwukuthenga okungenamsebenzi nhlobo. Ukuze ufunde ukuphana kuwe, udinga ukuqonda into esemqoka: "Yini engiyifunayo?", "Yini engiyithandayo?" Ngokuvamile, abesifazane abazi ukuthi baphendule.
Bavimba kakhulu okubalethela injabulo kangangokuthi abasakwazi ukuvuma abakuthandayo kubo.Bazinqabele konke! Uma kunjalo, ungenza umsebenzi Wokufuna Injabulo. Thatha isikhathi sakho futhi wenze uhlu lwezinto ongazijabulela nsuku zonke. 5-10 amaphuzu, ngangokunokwenzeka.
ukuvuka ekuseni, uvule umculo futhi ufudumale;
ekuseni, uphuze ikhofi kancane futhi ubheke idolobha elivukayo;
phakela amakati egcekeni, njll.
Lolu uhlu olunemibandela - wonke umuntu wesifazane unentokozo yakhe yansuku zonke. Ekuseni zibuze umbuzo: "Iyiphi injabulo engizozinikeza yona namuhla?" Shintsha isimo sakho sengqondo ngemali nokuthenga kancane kancane. Isibonelo, zivumele ukuphuza ikhofi endaweni ehlonishwayo, hamba ezitolo ezibizayo futhi ungesabi ukuzama izingubo, ngisho noma ungeke uzithenge.
Imali ingamandla. Beza kulabo bantu ababathandayo futhi bajabulele ukuchitha. Nalabo abesaba imali, bayigcinele usuku lwemvula, bayanyamalala.
Kukangaki sikhohlwa ngathi emizamweni yethu yokwenza izimpilo zabanye abantu zibe ngcono? Kodwa konke kuqala ngezifiso zethu, nekhono lokuzizwa
UKate Middleton noPrince William babelana ngezipho izingane zabo ezizithole ngonyaka odlule
UPrincess Charlotte noPrince George banenhlanhla enkulu. Ngenxa yokuthandwa komndeni wabo, bathola izipho eziningi kusukela ebuntwaneni, ezinye zazo ezingamangaza ngisho namagama abo
Yini okufanele uyenze ngezipho ezingadingekile? Ulahle noma udlulise?
Umuntu ngamunye unekhabethe ekhabetheni, lapho ebeka khona izipho lapho wethulwa, kodwa ezingadingekile kuye. Ngokushesha noma kamuva, indawo izophela, ngakho udinga ukwenza okuthile ngodoti wesipho
U-Arkady Voytyuk wakhuluma ngezipho zomkakhe ngoSuku Luka-Valentine
Owokugcina wesizini yesibili yombukiso wamazwi othi "X Factor" esiteshini se-STB u-Arkady Voytyuk uthe uzonikeza umkakhe uJulia ngoSuku Luka-Valentine